Umsebenzi Wokushumayela Uyaqhubeka EDominican Republic | Incwadi Yonyaka Ka-2015
Abathunywa Bevangeli Baqhubeka Beshumayela Ngokuchuliweyo
Ukuvalwa komsebenzi yaba kukuqala kwamaxesha obunzima kubazalwana. Umthunywa wevangeli uAlma Parson ubalisa athi: ‘IiHolo zoBukumkani zavalwa kuquka nomsebenzi wokushumayela. Abazalwana bethu balingwa baza babandezeleka kakhulu.’ Abazalwana baphulukana nemisebenzi baza bavalelwa. Sekunjalo, lo mthunywa wevangeli, ngoncumo uthi: ‘UYehova wayesikhokela yaye esikhusela izihlandlo ngezihlandlo.’ Abazalwana baqhubeka nomsebenzi ngokuchuliweyo ngenxa yokuthembela ‘kukhokelo lukaYehova.’
Sasingavunyelwa ukuba sibe neentlanganiso zebandla. ULennart Johnson ukhumbula oku: ‘Abazalwana baqalisa ukuhlanganisana ngokwamaqela amancinane ngokufihlakeleyo emizini. Kuloo mizi sasifunda amanqaku eMboniselo akotshwe ngomatshini wokukopa. Bonke abathembekileyo bayixabisa indlela uYehova awaqhubeka esomeleza ngayo kula maqela.’
URoy noJuanita Brandt ngabanye abaqhubeka nezabelo zabo ngoxa umsebenzi wawusavaliwe
Ngalo lonke elo xesha, urhulumente waqinisa aph’ ekuwaleqeni amaNgqina. Kodwa loo nto zange ibenze babe nedyudyu abazalwana noodade. Ebhalela uMongameli welo lizwe ngoSeptemba 15, 1950, uMphathiswa uHungría wathi: “UMnu. Lee Roy Brandt nezinye iinkokeli zeli qela lamaNgqina kaYehova baye bemana bebizelwa kule ofisi ukuze baxelelwe ukuba bohlukane nokulahlekisa abantu, ekubeni umsebenzi wabo uvaliwe kweli lizwe. Kubonakala ngathi abawuthobeli lo myalelo. Iimin’ ezi, sihlelelene nokuva iingxelo zokuba kwiindawo ezithile kweli lizwe, la maNgqina asaqhubeka nale nto yawo, egezela urhulumente.” Le leta yaqukumbela ngokucebisa ukuba kugxothwe zonke “iinkokeli eziphambili ezingezozalapha” zamaNgqina kaYehova.
Ekupheleni kuka-1950, uMzalwan’ uKnorr noMzalwan’ uHenschel batyelela elo lizwe. Emva koko, abanye abathunywa bevangeli bathunyelwa eArgentina, eGuatemala nasePuerto Rico. Abanye bafumana imisebenzi yempangelo kwelo lizwe. Ngokomzekelo, uMzalwan’ uBrandt wafumana umsebenzi kwinkampani yombane baza abanye baba ngootitshala besiNgesi. Ingxelo ekwiNcwadi Yonyaka ka-1951 yathi ngabo bathunywa bevangeli: “Ubukho babo kweli lizwe, bangemki, bulukhuthazo kubalandeli abathembekileyo beNkosi abayifundiswa ngaba bathunywa inyaniso. Wonke umntu uyavuya ngenkalipho abayibonisayo yokuqhubeka nomsebenzi wokushumayela.”
‘Ubukho babo babulukhuthazo kwabo bathembekileyo’
UDorothy Lawrence wayengomnye wabathunywa bevangeli ababa ngootitshala besiNgesi. Njengokuba efundisa isiNgesi, wayefundisa neBhayibhile kwabo banomdla. Ngenxa yoko, wanceda abaliqela bangena enyanisweni.
Abanquli abathembekileyo bakaYehova benza ezinye izinto ukuze baqhubeke nomsebenzi wokushumayela nakubeni babeleqwa. Ngamanye amaxesha babeyiqhawula amaphepha incwadi baze bawafake epokothweni yehempe okanye ebhegini yokutya ukuze kungabikho kurhanelwa. Ifomu yengxelo yasentsimini yatshintshwa yafana nephepha elinezinto eziza kuthengwa evenkileni. Endaweni yeencwadi, iincwadana, iimagazini, amabuyelo neeyure, kwabhalwa ipapaya, iimbotyi, amaqanda, ikhaphetshu nesipinatshi. Iikopi zeMboniselo kwakusithiwa ziiyuca, okanye icassava, isityalo esaziwayo kuloo ngingqi.
“Izinto eziza kuthengwa evenkileni”
Lechosas (iipapaya) = iincwadi
Frijoles (iimbotyi) = iincwadana
Huevos (amaqanda) = iimagazini
Repollos (amakhaphetshu) = amabuyelo
Espinacas (isipinatshi) = iiyure
Umsebenzi Wokwenza Abafundi Uyaqhubeka
NgoJuni 16, 1954, uRafael Trujillo wasayina isivumelwano neVatican sokuba oonyawo-ntle beCawa yamaKatolika bafumane amalungelo akhethekileyo eDominican Republic. Ngelo xesha, bekusele kudlule iminyaka emine uvaliwe umsebenzi kwelo lizwe. Sekunjalo, ngo-1955, kwakusele kukho abavakalisi abayi-478. Kwenzeka njani ukuba kubekho ulwando olungako kwiimeko ezinzima ngolo hlobo? INcwadi Yonyaka ka-1956 yathi: “Imfihlelo yamandla esinawo ngumoya kaYehova. Abazalwana bamanyene yaye bomelele elukholweni ibe batyhalela phambili ngenkalipho.”
NgoJulayi 1955, uTrujillo wafumana ileta evela kwikomkhulu. Le leta yachaza ngokweenkcukacha ukungathath’ icala kwamaNgqina kaYehova yaza yacela ukuba ‘ayeke ukuvala umsebenzi wamaNgqina kaYehova noweWatch Tower Bible and Tract Society.’ Yaphumela phi loo nto?